Ciyaartoy.com » CIYAARAHA GOBOLKA MN
Home » CIYAARAHA GOBOLKA MN
Jiirooni hal maalin ah
- Dec 28, 2012	Jiirooni hal maalin ah
Minneapolis: Waxaa maalintii Talaada ahayd lagu qabtay garoonka TC indoors Sports Arena ee gobolka Minnesota Jiirooni hal maalin soconayay, iyadoo jiiroonigaan u ku soo beegmay maalinta fasax ah ee bisha Dicember 25keeda.
Waxaa tartanka ku loolamayay 6 kooxood oo kala ah TC Stars, Tigers, Halgan, Faynuus, Eden Prairie iyo Kalsooni.
Koobkaan hal maalinlaha ah ayaa ahaa mid... Ciyaaraha Ramadan Gobolka Minnesota 2012 oo Furmay
- Jul 26, 2012	Ciyaaraha Ramadan Gobolka Minnesota 2012 oo Furmay
Minneapolis: Waxaa maalintii Jimcaha bisha Ramadaana ay kow ahayd 7/20/2012 si rasmi ah u furmay koobka Ramadanka 2012 ee gobalka Minnesota. Iyadoo sanadkaan lagu qabanayo koobka garoonka Twin cities indoor sports Arena oo ah garoon ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed.
Waxaa tartanka ku lug leh kuna loolamaya 12 kooxood oo kala ah TC Stars, Midnimo,... Kooxda Midnimo oo ku guulaysatay koobkii Somaliweek Minnesota 2012
- Jul 5, 2012	Kooxda Midnimo oo ku guulaysatay koobkii Somaliweek Minnesota 2012
Kooxda kubadda cagta ee Midnimo ayaa si xarago leh ugu guulaysatay koobkii loogu magac daray toddobaadka Soomaalida iyo Ameerica (Somali/American independence days tournment) oo 10kii maalmood oo aynu ka soo gudubnay si xiiso badan uga socday garoonka kubadda cagta ee lagu magacaabo James Griffin Stadium,ka dib markii cayaartoodii... Kooxda TC stars oo u dabaaldegtay guusheedii Ohio
- May 11, 2012	Kooxda TC stars oo u dabaaldegtay guusheedii Ohio Xaflad si aad ah looga soo shaqeeyay laguna soo dhaweynayay guushii ay kooxda kubadda cagta ee TC Stars (Twin City Stars) ka soo hooyeen tartankii Spring Break ee lagu qabtay gobolka Ohio iyo sannadguuradii ama kulankoodii 4aad ee Sannadlaha ahaa ayaa lagu qabtay makhaayadda bilicdasan ee An-Nuur International Restaurant, magaalada Minneapolis... Tacsi iyo duco loo sameeyay halgamayaashii Isboortiga ee geeriyooday
- Apr 13, 2012	Tacsi iyo duco loo sameeyay halgamayaashii Isboortiga ee geeriyooday.
Ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay qabanqaabiyayaashii barnaamijka oo iyagu ka socday ururka horumarinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan (SYDOM) iyo naadiga horumarinta kubadda cagta oo ururku leeyahay oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan SAYEC, kuwaasi oo aan ka xusi... TC STARS OO KU GUULEYSTAY KOOBKII OHIO 2012
- Apr 9, 2012	TC STARS OO KU GUULEYSTAY KOOBKII OHIO 2012
Koobkii ka socdoay magaallada Columbus Ohio ayaa la soo gabagabeeyay. Koobkan oo bilowday maalintii Jimcaha ayaa waxa uu si daran dooris ah uu uga socdaa magaalada Columbus, gobolka Ohio oo sanad walba xiligan oo kale lagu qabto magaallada Columbus ee gobolka Ohio.
Haddaba waxaa maanta oo ah Axad bisha Abriilna ay tahay 8, ciyaartii kama dambaystii ahayd... TC Stars iyo Tennessee oo ku kulmaya finalka koobka Columbus OH
- Apr 7, 2012	TC Stars iyo Tennessee oo ku kulmaya finalka koobka Columbus OH Kooxda TC Stars
Koobkii ka socdoay magaallada Columbus Ohio ayaa waxa uu marayaa ciyaartii kama dambaysta ama finalka. Koobkan oo bilowday maalintii Jimcaha ayaa waxa uu si daran dooris ah uu uga socdaa magaalada Columbus, gobolka Ohio oo sanad walba xiligan oo kale lagu qabto magaallada Columbus ee gobolka Ohio.
Haddaba waxaa... Koobkii Kubadda Cagta Ee Columbus OH oo si daran doori ah us socoda
- Apr 6, 2012	Koobkii Kubadda Cagta Ee Columbus OH oo si daran doori ah us socoda
Waxaa magaalada Columbus, gobolka Ohio ka socda koobka kubada cagta ee xagaaga oo sanad walba xiligan oo kale lagu qabto magaallada Columbus ee gobolka Ohio. Koobkan oo ah kii 11 ama sanadkii 11, ayaa waxaa haddaba iyagu ku loolamaya ama ka qeyb qaadanaya 16 kooxood oo ka kala socda gobolada Mareykanka iyo Canada. Koobkan ayaa waxa... Jiirooniga Odayaasha oo la soo gabagabeeyay
- Feb 7, 2012	Maalintii Jimcaha, bishuna ay ahayd 2/03/2012 ayaa waxaa magaallada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu soo gabagabeeyay koobkii labaad ee Jiirooniga Odayaasha.
Koobkan oo socday mudo labo bilood ah ayaa waxaa loo qabtay ciyaartoyda culusaatay ee degan labadda magaallo ee mataanaha ah (Minneapolis/Saint Paul) iyo nawaaxigooda.
Jiirooniga Odayaasha ayaa waxaa soo agaasimay Adam Ugaas iyo Garsoore... Isboorti oo booqasho sharaf ugu tagay Axmed Cabaas Busuri
- Jan 23, 2012	Isboorti oo booqasho sharaf ugu tagay Axmed Cabaas Busuri
Axmed... Next »	Afro Deli & Coffee	KOOBKII OHIO 2012	MAQAALLO »